रवि लामिछाने र अस्मिता कार्कीको मत बाझियो अस्मिताले लगाइन रवि र युवराज माथि यस्तो गम्भीर आरोप – " कञ्चनजंगा News "
रवि लामिछाने र अस्मिता कार्कीको मत बाझियो अस्मिताले लगाइन रवि र युवराज माथि यस्तो गम्भीर आरोप
No Comments on रवि लामिछाने र अस्मिता कार्कीको मत बाझियो अस्मिताले लगाइन रवि र युवराज माथि यस्तो गम्भीर आरोप
चितवन – मृतक पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परी न्यायिक हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने र अस्मिता कार्कीको मत बाझिएको पाइएको छ। उनीहरूले दिएको बयानमा दुईजनाको मत आपसमा बाझिएको अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाले बताए। कहाँ बाझियो रवि र अस्मिताको मत? देवकोटाका अनुसार अस्मिताले आफ्नो कारणले नभई रवि र युवराजका कारण आ त्मह त्या गरेको हो भनी बयान दिएकी छन्। बयानमा आफ्ना कारणबाट शालिकरामले आ त्मह त्या नगरेको जिकिर गर्दै उनले रवि र युवराजलाई पोलेको अधिवक्ता देवकोटाले बताए।
← वकिलले यसरी रिहा गर्न सक्छन् आज रविलाई → अस्मिताको बयानले रविलाई आज अदालतमा के हुन्छ? रवी लामिछानेको वकिलको खुलासा ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )